Dhicis xun oo ku dhacday jaranjarooyinka xafiiska, raaxo la aanta inta la rarayo gaari xamuul ah, qamri ka dhashay xumaanta qalabka kuleylka… Isla shilka, oo dhacay "shaqada darteed ama howsheeda", sababa dhaawacyo ama xanuuno kale, shaqaaluhu wuxuu ka faa'iideystaa magdhow gaar ah oo faa'iido leh.
Sharcigu kuma koobna kiisaskan oo keliya ... Markuu shaqaaluhu u dhinto shil ka dhacay shaqada ama cudur shaqo awgeed, waxaa xigta qaraabada in ay magdhow ka helaan bixinta sanadkiiba.
Tallaabooyinka ugu horreeya ee la qaado ka dib shilka : loo shaqeeyuhu wuxuu cadeyn ugu dirayaa sanduuqa aasaasiga ah ee caymiska caafimaadka 48 saacadood gudahood (Axadda iyo ciidaha dadweynaha kuma jiraan). Kan dambe wuxuu sameeyaa baaritaan si loo xaqiijiyo inay runti tahay shil xirfadeed, oo uusan ahayn mid gaar loo leeyahay. Kadib waxay ogeysiin u dirtaa qoyska dhibbanaha (gaar ahaan xaaska) iyo, haddii loo baahdo, weydiiso isaga macluumaad dheeri ah.
Ugu dambayntii, waxay hawlgabka siisaa ehelka xaq u leh. Haddii loo baahdo, Xiriirka Qaranka ee Shilalka Shaqada iyo
Dhimashada shaqada: maxaa magdhow ah? July 10th, 2021Tranquillus
READ Xirfadaha daryeelka iyo taageerada ayaa la qorayaa
horeNaafonimada iyo is dhexgalka xirfadeed
socdaShaqaalaha naafada ah: qodobbo cusub oo ku saabsan adeegga bulshada